ကင်ဆာ နဲ့ AIDS ပျောက် ဆေးပင် သမြားနီ – Tameelay
ကင်ဆာ နဲ့ AIDS ပျောက် ဆေးပင် သမြားနီ
သမြားနီဆေးပင်များသည်မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းကန့်ဂေါ်မြို့တွင် အများအပြားပေါက်ပါသည်
သမြားနီကိုအခြေခံသုတေသနလုပ်ပြီးလေ့လာချက်များအရ အနောက်တိုင်းဆေးများနှင့်ငွေတွေသောက်သောက်လဲကုန်အောင်ကုသော်လည်းမပျောက်ဘဲ သမြားနီနဲ့မှာပျောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်
စီပိုး ကူးစက်တက်တဲ့ပိုးရောဂါတွေလည်း ပျောက်ပါတယ်
သမြားနီဆေးပင်ဖြင့် HIVရောဂါဝေဒနာရှင်များရှာဖွေပြီး ကုသပေးရာ ရာနှုန်းပြည့်ပျောက်ကင်းကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်
“ကငျဆာ AIDS ပြောကျဆေးပငျ သမွားနီ”
သမွားနီဆေးပငျမြားသညျမွနျမာပွညျအထကျပိုငျး စဈကိုငျးတိုငျးကနျ့ဂျေါမွို့တှငျ အမြားအပွားပေါကျပါသညျ
သမွားနီကိုအခွခေံသုတသေနလုပျပွီးလလေ့ာခကျြမြားအရ အနောကျတိုငျးဆေးမြားနှငျ့ငှတှေသေောကျသောကျလဲကုနျအောငျကုသျောလညျးမပြောကျဘဲ သမွားနီနဲ့မှာပြောကျတာကိုတှရေ့ပါတယျ
စီပိုး ကူးစကျတကျတဲ့ပိုးရောဂါတှလေညျး ပြောကျပါတယျ
သမွားနီဆေးပငျဖွငျ့ HIVရောဂါဝဒေနာရှငျမြားရှာဖှပွေီး ကုသပေးရာ ရာနှုနျးပွညျ့ပြောကျကငျးကွောငျးလလေ့ာတှရှေိ့ရပါတယျ
ရေသန့်ဘူးဝယ်တဲ့အခါ ဒါတွေကို အထူးသတိထား ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ ရေသန့်ဘူးတွေ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူလို့ရနေတော့ သတိမထားဘဲ ဒီလိုပဲ သောက်သုံးနေကြတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ သို့သော်လည်း ပလက်စတစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒီရေသန့်ဘူးတွေဟာ အမှန်တကယ်ရော စိတ်ချမှု ရှိရဲ့လား ၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတာကို ဂရုမပြုမိကြပါဘူး …
ဖုန်းသုံးသူတိုင်းသိသင့်သိထိုက်သည့် ဖုန်းဘက်ထရီအကြောင်း !!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (၁) ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီးစေတတ် ပါသလား ? ဖုန်းကို မည်မျှ ကြာကြာ အားသွင်းသင့်သလဲ? ဟူသော မေးခွန်းသည် မိုဘိုင်းဖုန်းများ စပေါ် ကတည်းက လူသားတွေ မေးလာ ကြသော မေးခွန်း …
ဈေးထဲက လူသတ်သမား မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူဦးရေသန်း ၅၀ ကျော် ရှိပြီး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် ရပ်ကွက်ဈေးတန်း၊ လမ်းဈေးတန်း၊ ရွာဈေးတန်းတွေမှာပဲ အများစုဟာ ၀ယ်ယူစားသုံး နေကြရပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လူနည်းစုလောက်သာShopping Mall တွေ၊ Mart တွေမှာ ၀ယ်ယူစားသုံးကြတာပါ။ ဒီလိုခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ဈေးဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ …